Home Somali News Greece: Shacabka Giriiga oo Afti ku qaadacay qorshaha EU
Inta badan shacabka dalka Giriiga ayaa aftidii laga qaaday ku diiday qorshaha dhaqaalaha ee Midowga Yurub ku cadaadinayo wadankaasi.
Aftidii Axadii shalay ka dhacday dalka Giriiga ayey in ka badan 61% ku diideen qorshaha dhaqaalaha ee Midowga Yurub doonayo in lagu dhaqo dalkaasi Giriiga sanadaha soo socda.
In ka badan 38% dadka codkooda dhiibtay ayaa iyagu taageeray qorshaha Midowga Yurub.
Xukuumada Giriiga oo iyadu horey uga soo horjeeday qorshaha Midowga Yurub, ayaa taageero buuxda ka helay shacabka dalkaasi waxayna arrintan fursad u siineysaa xukuumada Giriiga inay gorgortan adag la galaan dalalka Midowga Yurub.
Wadamada Midowga Yurub ayaa iyagu sheegay in ay tixgelin doonaan aftida Giriiga, balse dhinaca kale arrintan waxay sii adkeyn doontaa in Midowga Yurub uu dhaqaalo dheeraad ah siiyo dalka Giriiga oo qarka u saaran burbur dhaqaale.
Qaar kamid ah shacabka Giriiga ayaa doonaya in ay isaga baxaan dalalka Midowga Yurub ee isticmaala lacagta Yuro, balse arrintan ayaa waxaa kasoo horjeeda ganacsatada oo ka cabsi qabo inay dhaawacdo dhaqaalahooda.
Dowlada Giriiga ayaa horey lacago badan oo deyn ah ka helay hay’ada IMF lacagtaasi oo inta badan ka timid dalalka kale ee Midowga Yurub, balse dalka Girgiiga ayaa wakhtigii loo qabtay inuu dib usoo celiyo lacagtaasi ku guuleysan waayey inuu bixiyo deyntaasi.
Midowga Yurub ayaa usoo jeediyey dowlada Giriiga inay hoos u dhigto kharashaadkeeda iyo qaar kamid ah adeegyada bulshada oo ay siiso shaqaalaheeda, si loo beekhaamiyo lacagta dalkaasi. Arrintan ayey kasoo horjeesatay xukuumada Girgiiga oo hada taageero xoogleh ka heshay shacabkeeda.
Wargane Tv: Drs Adna Aadan Oo Si Qiiro Leh Uga Sheekaysay Dhibaatadii Loo Soo Maray Nabada S/land Haysato
Cajiib: Daawo Wareysigii Ugu Cajiibsanah Ee Egland Show Iyo Wacdarihii Faalada Jeceylka Kkkk Qosolkii Aduunka + Muuqaal Xasaasi Ah
Muhaajiriin badan oo ku geeriyoodey badda u dhexaysa Liibiya iyo Talyaaniga
War Deg Deg Ah: Madaxweyne Gaas Oo U Soo Xadhko Xidhay Tuko-Raq + Madaxweyne Biixi Oo u Soo Jeeda + Dagaal Culus Oo La Filayo Inu Ka Qarxo